Cheta mmejọ okwu na eziokwu na abụba abụba na-enye iwu Pizza Hut na mbubreyo… ma jiri nlezianya gụọ nke a. Mgbe enweghị m ike ịnweta ngwa Pizza Hut iji rụọ ọrụ na iPhone m, agaghachiri m wee lee nyocha ahụ.
Ya mere,… Pizza Hut na-eziga ahịa tweet mgbe ahịa tweet na ọ bụghị n'ezie na-eme ihe ọ bụla ahịa ọrụ mbipụta. Enweghị m ike ịgwa gị ọtụtụ ụlọ ọrụ anyị na-ajụ na-ekwu ihe dị ka, "Oh, anyị na-dị nnọọ aga-eji Twitter maka Marketing." anyị na-adọ ha aka ná ntị na onye ahịa ahụ achọghị ịma ihe ọ bụ gị ebumnuche bụ mgbe ha nwere nkụda mmụọ ma nwee nsogbu na ọrụ gị.
Ndị ahịa anaghị eche na ọ bụ naanị akaụntụ Twitter ka ị ga - eji na - ere ahịa Pizza… ha chọrọ ka mmadụ lebara nsogbu ha anya. O doro anya na Pizza Hut enweghị nkọwa - ọ na-akụda mmụọ na ụlọ ọrụ buru ibu na-eleghara ohere ijere ndị ahịa ya mma. Nzaghachi ahụ dị n'elu mere ka ha nweta $ 50. 1 Tweet = $ 50.